Tetehina hogejaina ny fampahalalam-baovao | NewsMada
Tetehina hogejaina ny fampahalalam-baovao
Tsy fantatra intsony izay tena maika amin’ny governemanta. Ny ady amin’ny fahantrana hoe atao vaindohan-draharaha sa ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny serasera sy fampahalalam-baovao?
Hodinihina sy holanina amin’ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny Antenimierampirenena, hanomboka ny 3 mey, izany, raha tsy nampiraika izay ela izay. Kisendrasendra? Na misy antony hafa…
Tsy lavina, efa ampolo taona no nifamadibadihana tamin’ny fandrafetana io volavolan-dalàna io. Nihemo-dava ny mpitondra nifandimby… Izao, tsy inona tampoka teo, ihazakazahana ny raharaha.
Tsy anisan’ny maika ve, ohatra, ny fampijoroana ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM)? Tapitra fe-potoam-piasana ny teo aloha, ary tenenin-dava ny fihavanam-pirenena hoe fototry ny fampandrosoana.
Misy milaza fa karazana aroriaka farany amin’izao toe-draharaham-pirenena izao ny tontolon’ny serasera sy ny fampahalalam-baovao. Mbola mety azo hanitsiana izany? Amin’ny fitadiavana sy famoahana ny marina…
Saika tsy misy mihaino, ohatra, ny firaisamonina sivily; eny, na ny fampahalalam-baovao aza: farafaharatsiny, mba fantatry ny vahoaka ny marina amin’ny afitsoky ny mpitondra sy ireo olona akaiky azy.
Anisan’ny maha aroriaka farany azy izay? Na atahoran’ny mpitondra ihany, na eo aza ny tsy firaharahana na iza faly na iza miteny. Manao ny ataony hatrany izy ireo, fa ny tontolon’ny serasera izao no akaiky vahoaka.
Izay no tetehina hamehezana azy? Hamerenana ny sivana ankolaka na mivantana… Maika be ny fampandinihana sy fampandaniana ny volavolan-dalàna eny amn’ny parlemanta roa tonta. Ho vitavita ho azy amin’izao ve?
Raha izay fangejana ny tontolon’ny serasera sy ny fampahalalam-baovao izay tokoa no mahamaika: aiza indray ny hahazoan’ny vahoaka, na ny an-tanàn-dehibe ihany aza, maneho hevitra amin’izao afitsoky ny mpitondra izao?
Tsy azo atao ny hetsika an-dalambe na fitakiana sosialy aza, atao ampihimamba ny haino aman-jerim-panjakana, mbola banga ny toeran’ny mpanohitra eny anivon’ny parlemanta… Hidona amin’ny inona ny raharaha amin’izany rehetra izany?